Brijid Kosgei: Haadha ijoollee lakkuu fi riikardii addunyaa - BBC News Afaan Oromoo
Brijid Kosgei: Haadha ijoollee lakkuu fi riikardii addunyaa
Atileetooni yeroo hedduu qabxii gaarii akka argataniif wanti ta'e akka isaan kakaasu dubbatu. garuu atileeti Birijid Kosgeef ammoo rakkina yeroo ijjoollummaashee dabartiseetu cimina kennuuf dubbatti.
''Haalaan itti eegalee yoo yaadadhu rakkinni nu keessa dabarree guddataa jira. Kanaafu jireenya sanatti deebii'u akkan hinqabaannee ofi himuunan kiyyas akkan fiixaan bahiinsa argadhuuf na gargaareera,'' jechuun BBC'tti himte atileetiin Keeniyaa kan umuriin waggaa 25 tun.
Erga maaraatonii ittiin mo'attee kan jalqabaa figdee waggaa afur ta'eera. Kosgiin amma seenaa feegeenya km 42.2 tiin dubartii saffistuu ta'uun beekamti.
Torban darbees US magaalaa Chikaagootti rikardii lammii Ingliiz Paawulaa Raadkilifiin waggoota 16 dura Landaniitti qabame cabsuun sakandii 18 foyyeessitee jirti.
Rikardii ishee kan sa'aatii 2:14:04 kanas leenjisaa ishee Eeriik Kimaayoo waliin baatii jahaaf irratti hojjatan.
Fulbaana keessa, Kosgiin Shaampiyoonaa Atiletiksii Addunyaa Dohaatti gaggeeffameeraatti biyyashee bakka bu'uuf affeerraa dhiyaateef didde.
"Akka isheef dhiifama taasisaniif gaafannee sababii waan adda ta'e tokko raawwachuuf karoora qabanneef jecha.
Waa'ee isaas hindubannee ture. Sababiinsaas ishees dhiibbaa irratti taasisuu hinbarbaanne waan ta'eef,'' jedha Kimaayoon.
Naamusniifi kutannoon ishee ammoo waan yeroo hunda adda ishee taasisuudha.
"Wayituma leenjiitii kaaste atileetii beekumsa qabdu ta'ushee sirriitti himu dandeessa. Baayyee naamusa kan qabduufi leenjii irratti gonkumaa duubatti hafu kan hinbarbaadneedha,'' jedha lenjiisaan ishee Ngisiriin.
Gara mana barnootaatti gufgufuu
Birijiid ijoollee haadha ishee qofaan guddifaman torba keessaa tokko. Bakki itti guddattes Suluula Qinxamaa (Rift Valley) keessatti kan argamtu Kaawuntii Elgeeyoo Maaraakweetti.
Bakki kunis lafa atileetoonni biyyatti bebbeekamoon irraa maddaniidha.
Akkuma atileetota Keeniyaa kanneen ishee duraa hunda, Kosgeenis gara mana barnootaa sadarkaa tokkooffaa yoo deemtu ganama ganama ni fiigdi turte.
Kiipchoogee dorgomiisaa mo'ichaan xumure
"Manni barnootaa kiyyaa mana keenyarraa km 10 fagaata ture. Yeroo tokko tokkoos akka natti hinbarfanneef nan figa ture.
Daandii kiyyarrattis wayitan atileetota arguutti. Anis akka isaanii ta'un danda'an ofiin jedhan ture,'' jetti.
Achinis mana barnootaatti fageenya jiddugalaatiin dorgomu eegaltee. haa ta'u malee biyya bakka akka buutuuf gonkumaa hinfilatamne turte.
Haadha isheetiin kanfaltii mana barnootaa kanfaluun cimaa itti ta'een boodas, bara 2012tii Kosgiin barnoot aishee dhaabuuf dirqamte. Wayita kanattis bara barnoota ishee itti xumurtu ture.
''Wayitan ani kutaa 10ffaa turettis kanfaltiin gara doolaara 1,500 ol ture. Haati kiyyas nan liqeeffadha jechuun akkan itti fufu na jajjabeessuuf yaalaa turte. Garuu anis ''amma yoomiitti liqeeffannee itti fufuu dandeenya?'' jedheen jetti.
Boqannaa hojii ijoollee lakkuu argachuuf
Amma umuriinshee waggaa 17 wayita ta'utti fiigicha haalaan cimsite qabachuu barbaadde.
Kunis maatiisheefi kanfaltii mana barnootaa obboolaashee xixiqqoof kan haguugu ta'uuf jira.
Hiriyaashee dhiiraa Maatiiw Kosgii waliin leenjii itti fufte. Innis amma kan abbaa warraashee ta'e jechuudha. Waggaa tokkoon boodas boqonnaa fudhachuun ijoollee lakkuu deesse.
Haa ta'u malees haadhummaan kutannoo ishee irraa boodatti hindeebifneen. Bara 2015'tti bakkuma dhaabdee turte irraa kaasuun kaampii leenjii seenuun leenjiisaa isheen leenji'uu eegalte.
Kaampiiwwan akkasiis Keeniyaa keesatti ateletootaaf akka xiyyeeffannaa isaanii haala jireenya isaaniirraa kaasuun leenjiicha qofa irra taasisaniif haala mijjeessaaf.
Atileetoota dubartootaatiif maatiisaanii irraa fagaatanii jiraachuuf murtee taasisuun yeroo baayyee murtee cimaadha. garuu kanneen murtee kana taasisaniis isaan deegarsa maatii gaarii qabaniidha.
''Abbaan warraa kiyyas akka omaa hinyaaddofne natti hime. Ijoolleef kunuunsa barbaachisu akka taasisu natti hime.
Kanaafuu ani hojii kiyya qofarratti xiyyeeffachu akkan qabu waan natti himeef ijoolleenis torbaniitti wayitan gara manaatti deebi'uu qofa na argu amaleeffatan,'' jetti Kosgiin.
'Haatii kiyya baayyee gammadoodha'
Akkuma kaampicha keessatti leenji'uu eegalteen Sadaasa bara 2015tti figiicha maaraatonii jalqabaashee Portugaaliitti fiigde. Dorgommichas daqiiqaa afurii oliin fooggeessuun mo'atte.
Murteen isheen maaraatooniif fiiguuf taasiftees qabxii gaarii galmeessuun eegalame.
Wayita turtii leenjii kaampii ishee sanattis dorgomtooti maaraatonii hedduutuu ture. kanaafuu hiriiyyaa leenjii'ootaa argachuun isheef baayyee salphaa ture.
Ammas saffiisa ishee fooyyeessuuf leenjiitoota dhiiraa waliin fiigaa jirti.
"Isaan waliin leenjii'uun baayyee cimaadha. Sababiinsaas isaan baayyee saffiisu garuu ammoo yoon dadhabuuf jedhuu ''Lakkii, cimii itti fufii'' ofiin waanan jedhuufu na cimsa.''
Wayita ammaa kanattis dubartoota maaratooniif fiigala kan duraa bara 2019 keessatti argamti.
Bara dhufaatti ammoo xiyyeefannaa ishee dorgommiiwwan ispoortii hunda kan akka 'Dorgommiiwwan Olompikaatti'' irratti kan fuulleeffatu ta'a.
Amma haadha ishee gaafachuun gara mandaraatti deebii'aa jirti. Isheenis waan kana dura mo'attee irraa lafaafi mana bitteeffii jirti. Isaan boodas abbaa warraafi ijoollee ishee waliin yeroo akka dabarsitu dubbatti.
''Haati kiyya hanga na agartuutti na eegaa jirti. Isheenis wayitan ani rikardii cabseetti baayyee gammaddee jirti,'' jechuun gammachu maatii ishee ibsite.